★မြန်မာ့အလင်း★: ဟန်ဆောင်တိုင်းရင်းသား နှင့် အများအကျိုးစိတ်မ၀င်စားသော မြန်မာများ
ဟန်ဆောင်တိုင်းရင်းသား နှင့် အများအကျိုးစိတ်မ၀င်စားသော မြန်မာများ
ဟန်ဆောင်တိုင်းရင်းသား ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အလေးထားမှုတော့ မရရှာပါဘူး။ ဒီမိုဘလော့ နှစ်ခု မှာပဲ ဗီဒီယိုကို တင်ပြထားပါတယ်။ နအဖ ဘလော့တွေမှာ လုံးဝ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒီမိုမီဒီယာတွေမှာလည်း အဲဒီ သတင်းကို ထုတ်လွှင့်မှု မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ (မှားရင်ပြင်ပေးပါ) နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်မရှိလို့ လျစ်လျူရှုခံ ရဟန်တူပါတယ်။ အခုဗီဒီယိုကြောင့် ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ နာမည်ပျက်နေတဲ့ ဒီမိုတွေကို လူထုက ပြန်လည်ယုံကြည် အားထားလာမှာကို နအဖက လိုလားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိုမီဒီယာတွေကလည်း ရိုဟင်ဂျာဟာ တိုင်းရင်းသား တွေဆိုတာ အစဉ်တစိုက် လိမ်ညာပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါလား? ဒီမိုမီဒီယာတွေ သိက္ခာအတွက် အခုဗီဒီယိုကို လူမသိအောင်လုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
တနေ့က Australia က ဒေါ်လာ ၃ သန်း ရိုဟင်ဂျာအရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ သတင်းထဲမှာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၃ သန်းဆိုတာ မနည်းလှပါဘူး။ ဒီငွေတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်ခွင့်ရအောင် ၀ါဒဖြန့်ရေးနဲ့ တခြားသော နေရာတွေမှာ အသုံးပြုမှာပါ။ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်တဲ့ ကျနော်တို့ကတော့ အင်အားချိနဲ့လိုက်တာဗျာ။ ဆန့်ကျင်ရေး အင်အားက တနေ့တခြား လျော့နည်းလာတယ်။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားတော့ မှာလား? ယုတ်ညံ့လွန်းတဲ့ လူရမ်းကားဝါဒကို အမြစ်မဖြုတ်ရင် ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ အမြစ်ဖြုတ်ခံရမယ်။ အဲဒါချောက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုဗီဒီယိုက ဆွေးနွေးချက်မှာပါတဲ့ သမိုင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ ဒီနေ့ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာကို လေ့လာရင် ကျနော်တို့ ပြောနေတာ အမှန်ဆိုတာ သိလာပါမယ်။ မွတ်ဆလင်ဆိုတာ အင်မတန်ကို ရက်စက်ပြီး အောက်တန်းကျစွာ လုပ်ကိုင်ဖို့ သင်ကြားထားတဲ့ ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်က ဓါတ်ပုံက ဘာလို့ထင်လဲ? မှန်းကြည့်စမ်းပါ။ အဲဒါ အာသံပြည်နယ်မှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စလေးပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကကုလားတွေ နယ်စပ်ကျော်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံပြည်နယ်ကို ၀င်ပါတယ်။ ရွာသားတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ (မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အဲလို သတ်ဖြတ်တာတွေ မြင်ရတော့မှာပါ။ ) အဲဒီနေရာကို ကားနဲ့ သွားရောက် လေ့လာတဲ့အချိန်မှာ ကုလားတွေက လေးမြှား၊ လက်နက်အစုံနဲ့ ဓါတ်ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း သတ်ဖြတ်ဖို့ နောက်က လိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အာသံက မြန်မာ့အနွယ်ဝင်တွေကို သတ်ဖြတ်တာ ဘာကြောင့် အိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့ ရဲတွေက မကူညီတာလဲ ဆိုတာတော့ လေ့လာဆဲပဲရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ လိမ်ညာ ကောက်ကျစ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေက သူတို့နိုင်ငံရေး အကျိုးအမြတ်ပဲကြည့်တယ်။ မွတ်ဆလင်တွေက အောက်တန်းကျတဲ့ အလုပ်မှန်သမျှ လုပ်ကိုင်ရဲပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ ပေါင်းမိရင် ဆိုးရွားတဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စမြဲပါ။ အဲဒီ မွတ်ဆလင်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေတာ အမေရိကန်လား? ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလား? အိန္ဒိယအစိုး ကိုယ်တိုင်လား ? ဒါမှ မဟုတ် မွတ်ဆလင် အဖွဲ့အစည်းတွေလားဆိုတာ အတိအကျ မပြောနိုင်ပါဘူး။
မကြာသေးမီက ဖြစ်သွားတဲ့ mumbai အကြမ်းဖက်တဲ့ ကိစ္စလည်း အခုထက်ထိ တရားခံအမှန် မသိသေးပါဘူး။ နောက်ကွယ်မှာ အစိုးရ တစ်ခုခုကတော့ ပတ်သက်မှုရှိပါတယ်။ CIA ကတော့ အဲဒီကိစ္စကြိုသိထားသူမို့ အိန္ဒိယအစိုးရကို သတိပေးဖို့ တာဝန်ပျက်ကွက်မှုဟာ လုံးဝ မရိုးသားဘူးလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ပြည်သူတွေ သတိရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေ တိုင်းပြည်အရေးကို တတ်စွမ်းတရွေ့ မကူညီဘူးဆိုရင် တနေ့နေ့မှာ မြန်မာပြည်ကြီးကို ကုလားတွေ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။
ကဲ.. အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်လိုက်ပါဦး။
အဲဒီခွေကို မြန်မာပြည်မှာဖြန့် ဝေပေးပါ။
ဟေ့ေ၇ာင် tun ဒူးမနာသားအသံမကြား၇ဘူးလာ
ဗွီဒယိုကို အစအဆုံးကြည့်သွားပါတယ်။ ဒီအခွေကို အရင်က ဘယ်ဘလော့ဂ်မှာမှ မတွေ့ဖူးဘူး၊ အခုမှတွေ့ဖူးတယ်။ မှတ်တမ်းတင်ထားအပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တခုပါပဲ။ တင်ထားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မွတ်တွေဘာကြောင့် ၀တ်နဲ့ ခွေးကို ကြောက်ရ တာလဲ သိရင် ရှင်းပြပေးပါ
မွတ်စ်လင်မ်တွေက ဝက်နဲ့ခွေးကို မကြောက်ပါဘူး... ရွံကြတာပါ... ဘာကြောင့်ရွံကြလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို သိချင်ရင်... လူတွေ မစင်(ချေး) ကိုဘာကြောင့်ရွံကြလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားလိုက်ပါ... ထွက်လာမယ့်အဖြေကတော့ ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ...။
အဲ.. ဒါပေမယ့် ချေးကျုံးတဲ့သူတွေက ချေးနဲ့ ယဉ်ပါးသွားတော့ ချေးကိုမရွံတော့သလိုပဲ... ဝက်တို့ ခွေးတို့နဲ့ အမျိုးစပ်ထားတဲ့သူတွေကလည်း သွေးချင်းနှောနေတော့ ဝက်ကို ရွံရမှန်းမသိတော့ပဲ ... ရွံတဲ့သူတွေကို မကျေမနပ်ဖြစ်ကြတာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး...။